Họrọ nke kacha mma Social Media n'elu ikpo okwu nke dabara na azụmahịa gị chọrọ - anyị bụ onye nnọchi anya gọọmentị maka Agorapulse nke m gha akwadoro ulo oru obula. Ikpo okwu na-egosi mmekorita gị dị ka igbe mbata, na-enyere ụlọ ọrụ aka ịza ma ọ bụ nyefee azịza okwu n'ụzọ dị irè.
Nyochaa Social kwuru - ndị ahịa na atụmanya ga-ekwupụta gị na mgbasa ozi na-enweghị mkpado ma ọ bụ gwa gị okwu ozugbo. Ọ dị mkpa ka ị jiri ikpo okwu ebe enwere ike ịdọ gị aka ná ntị mgbe akpọrọ gị ka ị gaa n'ihu maka nsogbu ndị ahịa. Nke a bụ ihe ọzọ dị ukwuu nke Agorapulse, N'agbanyeghị.
jiri Aka nri nke olu mgbe nile - a naghị atụgharị sassy azịza ya nke ọma n'ịntanetị, yabụ kpachara anya iji mezie nzaghachi gị na arịrịọ a na-eme. Ndị otu gị kwesịrị ilekọta… dị ka ha na-elekọta… ka ị ghara iburu nyocha ma ọ bụ nkatọ ọzọ site na netwọkụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Cheta Mee na Emela nke Social Media - elegharala, hichapụ ma ọ bụ zoo ihe, bụrụ ihe na-agbachitere, tinye aka na trolls, ma ọ bụ mee ka ndị ahịa gị jiri ọtụtụ ozi. Kelee ha maka iwebata gị nsogbu ahụ, kweta na ha nwere nsogbu, ma rịọ mgbaghara maka nsogbu ahụ. Karịsịa, hụ na ị ga-enweta mkpebi nke na-eme ka onye ahịa nwee obi ụtọ.
Jiri nke a ọdọ Àmamihe - 91% nke ndị na-azụ ahịa na ntanetị kwuru na ha ga-eji otu ihe ama ama ama ma ọ bụrụ na ọ dị ya ma hazie ya maka mkpa ha.
Mara Mgbe I Ga-ewe Ihe Esemokwu Na-adighi - nzuko ọha na eze dị ka mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ọ gaghị abụ ebe kachasị mma maka ndị ahịa iwe na nsogbu dị mgbagwoju anya. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịrịọ onye ahịa ka o soro gị, jikọọ na ha site na ozi ziri ezi, ma kpalie mkparịta ụka ahụ na offline site na ekwentị ma ọ bụ ihu na ihu ebe ị nwere ike inyere ha aka nke ọma.